Taliyaha ciidamada Mareykanka ee B/Dhexe oo booqasho ku tagay saldhigyada ay Iran duqeyn ka geysatay - BANDHIGA
Taliyaha ugu sareeya ciidamada Mareykanka ee Bariga Dhexe ayaa booqasho ku tagay dalka Ciraaq, iyadoo maamulka Trump uu ka shaqeynayo sidii u badbaadin lahaa xiriirka kala dhexeeya hoggaamiyeyaasha Ciraaq isla markaana uu joojiyo tallaabada dowladda ee ah ka bixitaanka ciidamada Mareykanka.
Jeneraal Frank McKenzie ayaa noqdey sarkaalkii ugu sareeyay ee militariga Mareykanka oo booqasho uga taga dalka Ciraaq, tan iyo markii duqeyn diyaaradaha aan duuliyaha laheyn ee Mareykanka ka geystaan ​​magaalada Baghdad ay ku dileen Jeneraal sare oo tirsan ciidamada kacaanka ee Iiraan, taas oo keentay in dadka reer Ciraaq ay ka caroodaan ciidamada mareykanka eek u sugan dalka oo dhan.
McKenzie wuxuu la kulmay hogaamiyaasha Ciraaq ee ku sugan magaalada Baqdaad, ka dibna waxa uu u wecday dhanka xarumaha ciidamada mareykanka ee kaga sugan wadanka oo dhan, gaar ahaan waxa uu booqashada ku tagay, askarta Mareykan ah oo ku sugan saldhigga al Asad Air, oo ay Iran sheegatay in ay duqeeysay bishii hore.
Booqashadiisa ayaa timid xilli xiisada Mareykanka iyo ciraaq uu sii xoogeystay taasoo sii hurineysa mudaaharaadyada rabshadaha wata, gantaallo lagu garaacay safaaradda iyo cod ay baarlamaanka Ciraaq ku ansixiyeen ka bixitaanka ciidamada Mareykanka ee waddanka.
Waxa ay kaloo kicineysaa su’aalo ku saabsan haddii muuqaalka sarkaal sare ee milatariga Mareykanka in uu kicin karo tanaasul, ama si fudud u kicin karo xiisadaha iyo kala goynta wadahadalada socda ee gelinaya gantaalaha Patriot ee Ciraaq si ay u ilaaliyaan ciidamada isbahaysiga eek u sugan gudaha dalka.
Wakaaladda wararaka ee Associated press, ayaan ku warantay in Laba weriye ay la safreen sarkaalkan sare, labadii todobaad ee lasoo dhaafay.
Hogaamiyaasha ugu sareyso Mareykanka ayaa diidey dalabka Ciraaq ee ah in ciidamada Mareykanka ay baxaan gudaha wadanka, iyaga oo qaadanaya wax u muuqda dabeecad sugitaan iyo rajo iyadoo rajo laga qabo in dhibaatooyinka ay gudbi doonaan.
Ciraaq, si kastaba ha noqotee, waxay ka careysnaayeen duqeyntii diyaaradaha aan duuliyaha laheyn ee garoonka diyaaradaha Baqdaad 3dii Jan ay ku qaarijiyeen Qassem Soliemani. Iyadoo sidoo kale ay dileen taliye kuxigeenkii Ciidamada Mobilisation-ka Abu Mahdi al-Muhandis.
Iyada oo laga jawaabayo waxa ay hogaamiyaasha Ciraaq ugu yeerayaan jebinta madaxbanaanida, baarlamaanka ayaa meel mariyey qaraar aan meel marin oo ay ku boorinayaan ciidamada mareykanka in ay ka baxaan gudaha dalka oo dhan.
Iran ayaa waxa ay gantaalada ballistic ku garaacday laba saldhig oo ku yaal dalka Ciraaq, kuwaas oo ay ku sugnaayeen ciidamada Mareykanka.
Ciraaq ma jirin Patriots ama difaacyo kale oo dhinaca cirka ah oo awood u leh inay duqeeyaan gantaalada ballistic waqtiga duqeynta Iran.
Wasaarada gaanshaandhiga mareykanka ayaa sheegtay in ugu yaraan 64 qof oo ciidamada Mareykanka ay waxyeelo dhanka maskaxda kasoo gaartay, balse ma aysan cadeyn mareykanku in ciidamo looga dilay duqeymaha ay ka geysteen diyaarahada Iraan.
Mareykanka ayaa la sheegaa in kabadan 6,000 oo ciidan ah ay kaga suganyihiin gudaha Ciraaq, kuwaas oo ay u tababaraan oo ay ugala taliyaan ciidamada amniga Ciraaq dagaalka ay kula jiraan kooxaha ISIS.